Akon'ny RuNet · Avrily, 2011 · Global Voices teny Malagasy
Mandika sy mitatitra amin ny aterineto amin'ny fiteny Rosiana ho an'ny mpamaky manerantany ny tonian'ny RuNet Echo ato amin'ny Global Voices.
Avrily 2017 28 Lahatsoratra
Marsa 2017 16 Lahatsoratra
Jolay 2016 15 Lahatsoratra
Janoary 2016 12 Lahatsoratra
Desambra 2014 12 Lahatsoratra
Septambra 2014 15 Lahatsoratra
Jolay 2014 16 Lahatsoratra
Tantara tamin'ny Akon'ny RuNet tamin'ny Avrily, 2011
Rosia: Saripikan'i Moskoa, nanodidina ny taona 1931
Eoropa Afovoany & Atsinanana 22 Avrily 2011
Mpisera LJ nikolas11 no mizara [ru] sary vitsy mpanana ahitana an'i Moskoa nanodidina ny taona 1931 nopihan'i Branson DeCou, Mpivezivezin'ny taonjato XX sy mpaka sary. Sary nolokoina tanana mamelatra ny renivohitra Rosiana roa taona taorian'ny “Fiolahana Lehibe” ary nialoha ny nandravan'ny Bolshevika ny fiangonana maro tao Moskoa.
Belarosia:Ny Ambadiky ny Baomba sy ny Fipoahana
Eoropa Afovoany & Atsinanana 21 Avrily 2011
Tsy mbola levona akory ny setroka naterak'ilay fipoahana tao amin'ny Metro ao Minsk tamin'ny Alatsinainy, ny fanontaniana roa manao hoe : "Inona no tokony hatao? - Iza no tompon'andraikitra?" no apetraky ny tontolon'ny fitorahana bilaogy Belarosiana. Firehan-kevitra roa lehibe no mibahana, fiampangana na ny Filoha President Lukashenko na ny mpanohitra ara-politika, na eo aza ny fihetseham-po lalina mankany amin'ireo niharan-doza toa mampiray ny vahoaka ao Minsk.
Belarosia: Fihetseham-po taorian'ny fipoahana tao anaty metro
Eoropa Afovoany & Atsinanana 14 Avrily 2011
Nahafaty olona 12 hatramin'izao ny baomba nipoaka tao anatin'ny fiantsonana ktyabrskaya, métro any Minsk ny 11 aprily 2011 teo, ary an-jatony ireo naratra. Vetivety kely taorian'ny loza niseho, nandray ny fampaherezana nalefa tamin'ny tweet ireo fianakaviana sy naman'ireo niharam-boina tamin'ny alalan'ny tenifototra #minsk sy #minskblast (fipoahan'ny minsk). Nitanisa vavolombelona maromaro tao an-toerana...